Imidlalo yokudubula engcono kakhulu ye-PC | Izindaba zamagajethi
UPaco L Gutierrez | 30/12/2020 10:00 | Kubuyekezwe ku- 30/12/2020 16:37 | General, Imidlalo yevidiyo
Uma noma yiluphi uhlobo luvelela ngaphezu kwanoma yiluphi olunye kungxenyekazi ye-PC, leyo yi-Shotters (imidlalo yokudubula). Kukule nkundla lapho le midlalo ivame ukuxhashazwa khona kakhulu, inekhathalogi enkulu yayo yonke, kumuntu wokuqala nakumuntu wesithathu. Singathola nemidlalo yokuncintisana, lapho isici se-inthanethi sithola isisindoEminingi yaleyo midlalo eku-inthanethi yilokho esingakubona kuma-Esports. Ukudlala ngekhibhodi negundane kunika indawo eningi yokwenza ngcono, ngoba ukuqondisa ngenkathi sinyakaza kuba lula kakhulu.
Ngaphakathi kohlobo lwemidlalo yokudubula, sithola okujwayelekile ngemodi yomkhankaso, lapho indaba ekhulunywa kahle ihamba nathi, imidlalo yamaqembu ancintisanayo, lapho ukubambisana nabangane bethu kubalulekile ukuze sinqobe, noma impi iyadlondlobala, lapho ukuthola iqembu elihamba phambili ebalazweni kusisiza ukuthi siwunqobe umdlalo, sisodwa futhi nabanye. Kulesi sihloko sizokukhombisa imidlalo yokudubula engcono kakhulu ye-PC.
1 Ikholi Yomsebenzi: I-WarZone
2 I-DOOM Ephakade
5 Rainbow Six: Ukuvinjezelwa
6 Izindaba ze-Apex
8 Half Life: Alyx
Ikholi Yomsebenzi: I-WarZone
Ngeke ilahleke kunoma yikuphi okuphezulu, iCall of Duty ikwazile ukudala umdlalo ongakaze ubonwe uthuthukisa okwabonwa ngeBlackout kuCall of Duty Black Ops 4. Imephu enkulu esuselwa kumamephu e-Modern Warfare 2 anendawo enkulu lapho abadlali be-150 bezingelana khona kuze kube owokugcina umile. Umdlalo unezindlela eziningana, phakathi kwazo esingazidlala ngazinye, ama-duos, ama-trios noma ama-quartet, sakhe iqembu nabangane bethu nge-inthanethi. Umdlalo futhi usinikeza izindlela ezithile zomdlalo ekugcineni ngesimo semicimbi, efana ne-Halloween noma uKhisimusi.
Lo mdlalo une-cross-platform play, ngakho-ke uma singawenza usebenze sizongena empini nazo zonke izinkundla lapho isihloko sitholakala khona, lawa I-PC, i-PlayStation4, i-PlayStation 5, i-Xbox One, i-Xbox Series X / S.. Uma singafuni ukuwela umdlalo ukuze silinganise isikali, singawenza ungasebenzi noma kunini. Into enhle ngalesi sihloko ukuthi imahhala ngokuphelele, inikela ngezinkokhelo ngaphakathi kohlelo lokusebenza lokuthengwa kwesikhumba noma izikhumba zezinhlamvu. Okubalulekile ukuthi lezi zinkokhelo azihlinzeki nganoma iyiphi inzuzo, singathenga nokudlula kwempi nge- € 10.
Ukulandelana okuqondile kokuqaliswa kabusha kokuwina umklomelo kwe-saga ekhishwe ngo-2016 okwenziwe yi-ID Software, lapho ifuna ukunikela ngenhlanganisela engcono kakhulu yejubane, ukuhlanya nomlilo okungenzeka. Umdlalo ugqama ngesici sawo ngasinye esinikeza ukulwa okumangazayo ngokumelene nezidalwa ezivela ngaphansi komhlaba lapho into evelele kakhulu ukuthi bangaba nonya kangakanani, ngenxa yeGore abayinikezayo. Ku-DOOM Okuphakade, umdlali uthatha indawo yombulali wokufa (i-DOOM Slayer) futhi sibuya ukuzophindisela emandleni esihogo.
Umdlalo ubuye ugqame ngengoma enhle kakhulu nesigaba esibukwayo esisusa ama-hiccups kungakhathalekile ipulatifomu esiyidlalayo, kepha kwi-PC kulapho singayijabulela khona ngabo bonke ubukhazikhazi bayo, sisebenzisa i-Framerate ephezulu kakhulu kubaqaphi be-144Hz.
Thola ukunikezwa kwe-DOOM Okuphakade ku-Amazon kulesi sixhumanisi.
Akungabazeki ukuthi omunye wemidlalo ethandwa kakhulu eminyakeni yamuva, sekuyinto yangempela, umdlalo odlalwa ngabadala nabancane. Kuyi-Battle Royale lapho iqembu noma umdlali ogcine emi anqobe khona. Kumele sihlole imephu yakhe enkulu sifuna imishini yokulwa nezimbangi. NjengeWarZone, ine-crossover play ngakho womabili ama-PC nama-console gamers azodlala ndawonye uma ekhetha.
I-Fortnite ivelele kuyo yonke iBattle Royale ngama-aesthetics ayo e-animated nangombono wayo womuntu wesithathu, futhi inesistimu yokwakha enikeza okuhlukahlukene kakhulu ku-gameplay. Uma ufuna umdlalo omnandi ozowudlala nenkampani, ngobuhle obungebucayi kangako, ngokungangabazeki inketho enhle. Umdlalo umahhala, unokuthenga ngaphakathi kohlelo ngokusebenzisa imali ebonakalayo okufanele siyithole ngaphambilini. Futhi singathola iphasi lokulwa ukuze sithole okungeziwe ngokususelwa ekudlaleni.
I-Master Chief isithonjana se-Xbox futhi manje isiyatholakala kubo bonke abadlali be-PC, ithuba lokudlala lonke isaga le-Halo. Iphakethe elifaka i-Halo: Combat Evolve, Halo 2, Halo 3 neHalo 4. Zonke zinokulungiswa okungcono nokusebenza okuthuthukile, imidlalo enezindlela ezijulile zomdlali oyedwa, ukujabulela enye yama-sagas amahle kakhulu akhiqizwe yi-Microsoft kuphela.
Ngaphezu kwalokho, iMicrosoft ifake inqwaba yamaseva azinikele wabadlali abaningi, umdlalo uthokozela ukudlala phakathi kweXbox nePC, ngakho-ke ngeke kube khona ukusweleka kwabadlali bemidlalo yakho. Ngombono womuntu wokuqala nezinye izitha ezingaphandle ezizosibeka ezintanjeni kanye negeyimu emnandi kakhulu.
Thola i-Halo: The Master Chief Collection ngentengo engcono kakhulu ku-Steam ngalokhu isixhumanisi
Rainbow Six: Ukuvinjezelwa
Omunye umdlalo ogqame ohlangothini lwawo lokuncintisana, yisitolimende sakamuva sesaga esaziwa kakhulu sikaTom Clancy sikaRainbow Six, esifaka phakathi umdlali oyedwa, ukubambisana nezindlela zabadlali abaningi ezi-5. 5. Kususelwa ekulweni phakathi kwamaphoyisa namaphekula, ngenkathi Amaphekula ahlala esakhiweni, iqembu lamaphoyisa kumele liwaqede ngezitayela ezahlukahlukene zokuhlasela. Umdlalo uqukethe amakilasi angamashumi amathathu ahlukaniswe izizwe, ngasinye sazo sigxile ohlotsheni lwesikhali noma ikhono.
I-R6 ithokozela omunye wemiphakathi ye-PC enamandla kakhulu, igxila kwisisindo sayo esikhulu kunazo zonke ohlangothini oluku-inthanethi naku-Esports. Kusukela wethulwa ngo-2015, lo mdlalo awukayeki ukuthola izibuyekezo zamahhala nezinkathi ezinikeza impilo engapheli, ngaphezu kokunciphisa ezinye izimbungulu ezivela noma ukungena kwabakhohlisi. Umdlalo njengamanje unenani elikhangayo, ungadlalwa wedwa kepha kunconywa ukuwudlala nabangani ukuwujabulela.
Thola i-Rainbow Six: ukuvimbezela ngentengo engcono kakhulu kwi-Steam kusuka kulokhu isixhumanisi
Bekungeke kulahleke kulolu hlu, kusuka kubasunguli beTitanfall, i-Respawn Entertainment ikhiphe umhlabeleli wesaga seTitanfall, yize isilahla igama layo, ayikwenzi lokho ngomoya we-franchise nge uyahlanya futhi uyahlanya igeyimu. Umdlalo unebalazwe elikhulu lapho sibhekene nenqwaba yabadlali noma amaqembu empini lapho noma ngubani ogcina ezophumelela khona, njenganoma iyiphi impi yempi.
Sigqamisa izinhlobonhlobo zayo eziningi zabalingiswa, lapho sithola khona amakhono akhethekile, njengerobhothi elinengwegwe elizosiza ukufinyelela kuzingxenyekazi eziphakeme. noma umlingiswa okwazi ukusebenzisa isivinini se-ultra noma ukudala ipulatifomu yeqa ezosiyisa komunye umkhawulo wemephu. Zonke zihambisana nezikhali ezahlukahlukene esingangezela kuzo izesekeli ze-ingame, ngakho-ke uma sithola isibhamu ngaphandle kwezesekeli, singazengeza njengoba sizithola noma sizithatha ezitheni ezibhekiwe. Umdlalo umahhala ngezinkokhelo ezingaphakathi nohlelo.
Thola i-Apex Legends ku-Steam ngalokhu isixhumanisi
Esokugcina se-saga yeMetro, esuselwa emhlabeni owenziwe ngemuva kokubhujiswa lapho izilo zibusa emigwaqweni, umdlalo utshela indaba ka-Artyom, ophambili wemidlalo edlule, emsebenzini wakhe onzima wokuqala impilo entsha empumalanga yeRussia ebandayo. Umdlalo uqukethe isimo sezulu esiguqukayo ngezigaba zobusuku nemini ebalazweni elikhulu okufihla izimfihlo eziningi nezikhathi ezesabekayo impela.
IEksodusi inokuthuthuka okuvulekile kanye nezwe eliguqukayo lapho ukuhlola nokuqoqa izinsiza kubaluleke njengokulwa nezidalwa. Ayinabo abadlali abaningi, into exakile ukuyibona kumuntu wokuqala wokudubula umdlalo, kepha kuyahlonishwa ukuthi awukhohlwa ukuthi ukudubula kumuntu wokuqala nakho kungaphatha uzungu ngemuva. Ingoma yomdlalo iyasiza ukuzicwilisa endaweni yayo yonke isiyonke.
Thola umdlalo ngentengo engcono ngalokhu Isixhumanisi se-Steam.
Okokugcina, sikhuluma ngesimanga sango-2020, yisitolimende sakamuva seHalf Life. Cha, akuyona i-Half Life 3 elindelekile, i-Alyx ngumdlalo omusha osebenzisa iqiniso langempela ukusihambisa endaweni yonke yeHalf Life ngendlela engcono kakhulu. Imicimbi yomlando wayo omangalisayo isibeka phakathi kwemidlalo yokuqala neyesibili yesaga futhi usibeka ezicathulweni ze-Alyx Vance. Isitha siya siqina futhi siqine, kuyilapho ukumelana kuqasha amasosha amasha azolwa nawo.
Akungabazeki ukuthi ngumdlalo omuhle kakhulu ongokoqobo kuze kube yimanje, sizowuthokozela kokubili ukulandisa kwawo negeyimu yawo, ubude bayo buyamangaza yize bungumdlalo weVR, ojwayele ukona isikhathi esifushane. Amasethingi ayo ayilindelwe yinoma yimuphi umlandeli wochungechunge, enomoya omangalisayo nezilungiselelo ezisivumela ukuthi sihlanganyele cishe nanoma iyiphi into esiyitholayo. Umphakathi usebenza ngokungakhathali ukudala ama-mods futhi wandise umdlalo. Umdlalo ngokungangabazeki unzima kakhulu ku-PC, ngakho-ke sizodinga imishini yesimanje impela, kanye nezibuko ezihambisanayo.
Thola Isigamu Sokuphila: I-Alyx ngentengo engcono kulokhu Isixhumanisi se-Steam.
Uma ungadubuli, kule enye indatshana sincoma imidlalo yokushayela, nathi sikunikeza isincomo emidlalweni yokusinda.
Uma ungenayo i-PC ungabheka le ndatshana lapho sincoma imidlalo yePS4 noma lokhu okunye lapho sincoma imidlalo yeselula.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Imidlalo yevidiyo » Imidlalo yokudubula engcono kakhulu ye-PC